August 16, 2019 - Myitter
August 16, 2019 Myitter 0
အကျအဆုံးများမှာဆိုးလို့ ရှော့တိုက်ဒုံးများ မပစ်ပဲ တပ်ဆုတ်ခိုင်းလိုက်တာပါဟု TNLA အရာရှိဆိုးသြဂုတ်လ(၁၅) ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပြင်ဦးလွင် နောင်ချို တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွင် ပြင်ဦးလွင်ရှိ တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်တွင် ပစ်ခတ်ရန် စီစဉ်ထားသည့် ရှော့တိုက်ဒုံးများ တွေ့ရှိရကြောင်းသိရသည်။ ၄င်း တိုက်ခိုက်မှုတွင် တပ်မတော်နည်းပညာတက္ကသိုလ်အပါအ၀င် ပြင်ဦးလွင်နှင့် နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ တပ်နှင့် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များအား […]
ဒီနယ်မြေအတွင်းမှာ နည်းနည်းတော့ကြမ်းမယ်ဗျာ…… ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း….. နောင်ချို မိုးကုတ် မိုးမိတ် မိုင်းလုံ သီပေါ နမ့်မတူ ကျောက်မဲ……. ဒီနယ်မြေအတွင်းမှာ နည်းနည်းတော့ကြမ်းမယ်…. ရမ်းကားတာမဟုတ်….လွမ်းစရာစကားတွေလာမပြောနဲ့…. စစ်သား တာဝန်ချိန်မှာ…..စစ်ဆင်ရေးကာလမှာ မလွမ်းတတ်ဘူး…. နောက်နေ့….အာရုံအတက် နေအထွက်မှာ ခွေးအသေကောင်… ခွေးအရှင်ကောင် ဘယ်နစ်ကောင်ရမလည်းကြည့်ထား…. တရုတ်ပြည်မကူးဘို့ ကအဓိက…..။Heinn Htet အခု […]
မြေပြိုပိလို့ အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ သားအမိ ဝင်ပူးနေတဲ့ ရုပ်သံ မြေပြိုပိ့ အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ သားအမိ ဝင်ပူးနေတဲ့ ရုပ်သံမြေပြိုပိလို့ အသက်ဆုံးခဲ့ရတဲ့ သားအမိ ဝင်ပူး သဲဖြူကုန်းမှာ ရေဘေးရှောင်ဖို့ တောင်ပေါ်ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားမှာ နေရင်း တောင်ပြိုပိပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ မိခင် မအေးအေးထွန်းနဲ့ ၁နှစ်ခွဲအရွယ်ရှိ သားဖြစ်သူ မောင်လင်းခန့်ဟိန်းပါ. ….. […]
“အပူထုတ် ရေချိုးနည်း” – ဆရာကြီးဦးရန်အောင် (သြ/သု) “အပူထုတ် ရေချိုးနည်း” လူတွေမှာ ငုပ်လှောင်အောင်းတဲ့ အပူတွေရှိပါတယ်။ ဒီအပူတွေကို ရေချိုးပြီးမထုတ်ရင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ အောင်းပူတွေကို စံနစ်တကျမထုတ်ဘဲ ကန်ထွက်စေမယ်ဆိုရင် အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ရေချိုးနည်း မှန်ဖို့ လိုပါတယ်။ ရောဂါရှိသည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေ လူတိုင်းအတွက် အောင်းပူတွေ ထွက်စေမယ့် […]
ကလေး၂ ဦး အား ဖမ်းဆီး ပါ က ၄လောင်းပြိုင် လူသတ်မှု့ ကို ဖော်မ ည်ဟု ပြည်ထဲရေးအား ချိန်းခြောက်
ကလေး၂ ဦး အား ဖမ်းဆီး ပါ က ၄လောင်းပြိုင် လူသတ်မှု့ ကို ဖော်မ ည်ဟု ပြည်ထဲရေးအား ချိန်းခြောက် ဗစ် တိုးရီး ယားလေးအား လိင်အကြမ်းဖက်ပြူသူ ကိုကို နဲ့ ညီညီ ၂ ဦးအား ဖမ်းဆီးပါက […]
16ရက် ၈လ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ၂လုံး ၃လုံး 2D 3D ချဲပေါက်ဂဏန်းများ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရန် ရှဲထားပေးပါနော် Video တိုက်ရိုက် ကြည့်ရန် ကံကောင်းကြပါစေ လှူဒါန်းနိုင်ကြပါစေ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်ကြပါစေ စိတ်နှလုံး ချမ်းသာကြပါစေ အရာရာမှာ ပြီးပြည့်စုံကြပါစေ ဝါတွင်း (၃)လ ရက်ပေါင်း(၉၀) […]
၇ ယောက်နဲ့ ရာချီအုပ်ကြီးကို ၃ နာရီလောက် ခံပစ်သွားတာတဲ့ ဂုတ်တွင်းထဲက ကောင်လေးကို လေးစားတယ်
၇ ယောက်နဲ့ ရာချီအုပ်ကြီးကို ၃ နာရီလောက် ခံပစ်သွားတာတဲ့ ဒီနေ့ ၁၀၁ က 2IC အကိုကြီးနဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ … “ငါ ဂုတ်တွင်းထဲက ကောင်လေးကို လေးစားတယ်ကွာ .. ၇ ယောက်နဲ့ ရာချီအုပ်ကြီးကို ၃ နာရီလောက် ခံပစ်သွားတာ .. […]
“သတင်းရရှိမှု အားနည်းခဲ့လို့ ဖြစ်တာ။ကျဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက် စိတ်လည်း မကောင်းပါဘူး” ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ နောင်ချိုမြို့နယ် မန္တလေး-လားရှိုးကားလမ်း၊ ဂုတ်တွင်းရှိ ရဲကင်းစခန်းကို ဩဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ်အဖွဲ့က လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့အင်အား၂၀၀ ကျော်ဖြင့် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွင် ဂုတ်တွင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ကျ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးတို့နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာ […]
ရည်းစားဖြစ်သူ၏ ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ သိန်း၂၁၀၀ ကျပ်ကို လွဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး တိမ်းရှောင်နေသည့် ဧရာဝတီဘဏ်အငယ်တန်းစာရေးမနှင့်အပေါင်းပါများအား ဖမ်းမိ
ဘဏ်အပ်ငွေသိန်း(၂၁၀၀) ကိုသူရည်းစားဖြစ်သူရဲ့ ငွေစာရင်းထဲလွဲပြော င်းပေးခဲ့တဲ့ဧရာဝတီဘဏ်အငယ်တန်းစာရေးမနှင့်အပေါင်းပါများအားဖမ်းဆီးရမိ ဧရာဝတီဘဏ်အငယ်တန်းစာရေးမကဘဏ်အပ်ငွေသိန်း(၂၁၀၀)ကိုသူရည်းစားဖြစ်သူရဲ့ငွေစာရင်းထဲလွဲပြောင်းပေးမူဖြစ်ပွားခြင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့အုပ်ချုပ်မူတပ်ခွဲ့ မှ ဌာနစုမှူး ရဲအုပ် အောင်ကိုသန့် ကြီးကြပ်မူဖြင့် ဒုရဲအုပ်ထွန်းကိုကိုနှင်အဖွဲ့မှခက်ခက်ခဲခဲ စွမ်းစွမ်းတမံဖမ်းစီးရမိခြင်း သြဂုတ် ၁၆ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့ ၁၀၃၀ အချိန် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်ရှိ ဧရာဝတီ ဘဏ်ခွဲ(၄၅)တာဝန်ခံ […]
Counterပြန်လာတဲ့ ဗုံးသီးကိုတစ်ဖွဲ့လုံးကျသွားမှာစိုးလို ရင်ဘတ်နဲ့အုပ်ပြီး ကျန်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွက် ရဲရင့်စွာ အသက်ပေးသွာတဲ့ ဗိုလ်​ကြီး ရဲကိုဦး
Counterပြန်လာတဲ့ ဗုံးသီးကိုတစ်ဖွဲ့လုံးကျသွားမှာစိုးလို့ဗုံးသီးပေါ် ရင်ဘတ်နဲ့အုပ်ပြီး ကျန်တဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေအတွက် အကာအကွယ်ပေးကာ ရဲရင့်စွာ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း မြင့်မြတ်စွာ အသေခံသွားတဲ့ဗိုလ်​ကြီး ရဲကိုဦးကောင်းရာသုဂတိလားကြပါစေ။ စစ်ကားဇာတ်လမ်းတွေထဲက ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွက်တွေထက် ပိုမိုရဲရင့်တဲ့ စစ်သည်တော်တွေ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာဟာ ဘာနဲ့မှနှိုင်းယှဉ်လို့မရနိုင်တဲ့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံးဂုဏ်ယူစရာပါပဲ။ Crd- Ei Khaing မြန်မာပြည်အတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းများစာရင်း ကို […]